သတင်း - ပါဝါလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာဘက်ထရီများအကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
1. အလုပ်လုပ်သောဗို့အားအရွယ်အစား မတူပါ။
လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည် ဘက်ထရီနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အားတက်လာသည့်အခါ နှိုင်းရအထွက်ဗို့အားလည်း တက်လာမည်ဖြစ်ရာ ပါဝါလီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအိတ်သည် ပါဝါမြင့်သည့်စက်ပစ္စည်းအချို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်စေရန်၊စီးရီးချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း၏ ချက်ခြင်းအန္တရာယ်မှာ ဘက်ထရီအထုပ်များအားလုံး၏ လက်ရှိစီးဆင်းမှုကို တိုးစေပြီး ၎င်းသည် အသံအတိုးအကျယ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။E သည် လက်ရှိပမာဏကို ထုတ်လွှတ်သောကြောင့် စီးရီး၏ ချက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် Li-Ion ဘက်ထရီအထုပ်ကို ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။အသံအတိုးအကျယ် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဤနည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘက်ထရီ၏ ပမာဏသည် ရိုးရှင်းသော စကားဖြင့် ထုလုပ်ထားသည့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ ပမာဏ ပိုကြီးလာသည်။
ပါဝါလီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို အဓိကအားဖြင့် ထုထည်ကြီးမားသောလိုအပ်ချက်များ၊ တာရှည်ခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသက်တမ်းနည်းပါးသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအတွက် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။pneumatic ကိရိယာများအတွက် ဘက်ထရီသည် သေးငယ်သော အသံအတိုးအကျယ်ရှိပြီး ပါဝါမြင့်မားသော အထွက်ကို ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ဘက်ထရီကို ပါဝါပေးရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုပြီး ပါဝါမြင့်မားသော အထွက်ရှိရပါမည်။
2. အသုံးပြုထားသော ထုတ်ကုန်များသည် တူညီခြင်းမရှိပါ။
အထွက်နည်းသော ပါဝါဘက်ထရီများ အလုပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့် အချို့သော အကြီးစားနှင့် အလတ်စား စက်ယန္တရားများနှင့် စက်ပစ္စည်းများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော အလုပ်လုပ်နိုင်သော ဗို့အားတန်ဖိုးရှိရန် လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာ အထွက်နည်းသော ပါဝါဘက်ထရီများသည် အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် ပါဝါလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ရွေးချယ်ထားသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ လူတို့သည် ယေဘူယျအားဖြင့် လျှပ်စစ်ကားများကို အသုံးပြုကြပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သော ဗို့အားတန်ဖိုး 48V ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝအခြေအနေအချို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 48V သည် အလွန်မကြီးပါ။ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ကားများ၏ လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးဝယ်စင်တာကြီးများ သို့မဟုတ် စျေးဝယ်ပလာဇာအချို့၊ ဆိုင်းဘုတ်မီးများနှင့် အရန်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုအချို့ကို သွားလေ့ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤစက်ပစ္စည်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ ပါဝါသုံးစွဲမှုမှာ အလွန်မကြီးသောကြောင့်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွဲပြားနေသည့် ပြန့်ကျဲနေသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို အသုံးပြုကြသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လျှောက်လွှာ။
BYD ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်ရထားနှင့် စွမ်းအင်သစ်ကားများတွင်အသုံးပြုသည့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ပါဝါလီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အညီ အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲထားသည်- ပါဝါထောက်ပံ့မှုအမျိုးအစားများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အမျိုးအစားများနှင့် switching power supply နှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အမျိုးအစားများ။ပါဝါ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် 10C အထိ ပေါ်လီမာဆဲလ်များဖြင့် ဘက်ထရီအားသွင်းရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး အခြေခံသတ်မှတ်ချက်မှာ အထူးရည်ရွယ်ချက် (W/kg) ဖြစ်သည်။အရွေ့စွမ်းအင်မျိုးစိတ်များ၏ အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (WH/kg) ဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ထုထည်အမျိုးအစားသည် မာရသွန်အပြေးသမားဖြစ်ပြီး ကာယဗလရှိရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ထုထည်သည် ကြီးမားပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်း၏ အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုလက္ခဏာများ မလိုအပ်ပါ။အထွက်ပါဝါအမျိုးအစားသည် အလေးမသမားဖြစ်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားဖြစ်သည်၊ မဟုတ်ပါက ထုထည်သည် သေးငယ်ပြီး အလွန်နီးကပ်ပါသည်။
ပါဝါလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည်သည် ထုထည်ကြီးမားသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထက် သေးငယ်သည်။18650 ကို သာဓကအဖြစ်ယူ၍3ကြိမ်အားသွင်းနှုန်းကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် PDC တွင်အတွင်းခံခုခံမှု 40 ခန့်ရှိပြီး PDC တွင်5ကြိမ်အားသွင်း-အလွတ်နှုန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် PDC ၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှု 20 ခန့်ရှိသည်။ %